शेयर बजारमा ब्रोकरहरुको दादागीरि कहिले सम्म ? ग्राहकको पैसा हप्तौसम्म आफ्नै झोलामा ! - सिम्रिक खबर
शेयर बजारमा ब्रोकरहरुको दादागीरि कहिले सम्म ? ग्राहकको पैसा हप्तौसम्म आफ्नै झोलामा !
काठमाडौँ । नेपालको शेयर बजारमा बढीरहेको ब्रोकरको हैकम र ग्राहक ठग्ने प्रवृतिलाइ नियामक संस्थाले केही गर्न सकेको छैन् । हाल नेपाली शेयर बजारमा १९ लाख भन्दा धेरै डिम्याट खाता रहेका छन् । ७ लाख जति मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । १ लाख अनलाइन प्रयोगकर्ता छन् । जसमा २० खर्ब भन्दा धेरैकोे बजार रहेको छ भने दैनिक ३ अर्ब भन्दा धेरैको कारोबार भइरहेको हुन्छ । तर यति ठुलो शेयर मार्केटमा ब्रोकर कम्पनीहरुकोे ठगीधन्दा खुलेआम भइरहँदा पनि शेयर कारोबारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड चूँ पनि बोल्न नसक्नु लाजमर्दाे भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
हाल शेयर कारोबारको लाइसेन्स पाएका ५८ ब्रोकर छन् । उनीहरुले पैसा असुल्ने क्रममा ग्राहकबाट खोसेरै पैसा असुलेर शेयर बिक्री गर्छन, तर शेयर बिक्री गर्ने ब्यक्तिलाइ पनि हप्तौ सम्म पैसा दिदैनन् । मनी एट्याक मटीकोे पोलिसी जस्तै हजारौ देखी लाखौ रकम हप्तौ सम्म आफुसँग राख्दा आफ्नो फाइदा हुने भएको कारण पनि ब्रोकरहरुले शेयर बिक्रीकर्तालाइ निकै हेप्ने गरेका हुन् । कुनै ब्यक्तिले शेयर खरिद गर्न चाहेको खण्डमा दलालहरुलाइ शेयर किनेको ४ दिनमा पैसा अनिवार्य तिर्न पर्ने हुन्छ । तर त्यो शेयर बिक्री गर्ने ब्यक्ति वा संस्थालाइ भने ब्रोकरले १५ दिन सम्म झुलाउने गरेका छन् । ताकि उक्त शेयरवालाको पैसा उनीहरुले खरिदकर्ताबाट चौथो दिनमा असुली सकेका हुन्छन् ।
यसरी साना ग्राहकहरुलाइ मिच्ने काम गर्ने हरु मध्ये एक उदाहरण अब्बल दलाल कम्पनी नासा सेक्युरिटिज पनि पर्छ । यसका अधिकाशं ग्राहकहरु यसको काम कारवाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । शेयर बिक्री भइसकेपछि दुइ हप्ता भन्दा बढी सम्म बिक्रीकर्ताको रकम नदिने गर्ने गरेको अधिकाशंको आरोप रहेको छ । एक लगानीकर्ताले नाम नबताउने सर्तमा भने, “ब्रोकर एजेन्सीले शेयर बेचीसकेपछि न त फोन उठाँउछन् , न त समयमै पैसा फिर्ता दिन्छन्।” उनले यी दलालहरुको अफिस पनि नभेटिने गरेको कारण खोज्न पनि समस्या हुने गरेको सुनाए । भर्खर प्राथमकि बजारबाट दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न खोज्ने लगानी कर्ता र सानो पूँजी भएका लगानीकर्तालाइ त यी दलालहरुले रुने बनाएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । नया लगानीकर्ताहरुलाइ कुनै रेस्पोन्स नै गरिदैन । ठुला ठुला कारोबार गर्नेलाइ मात्र शेयर मार्केटमा महत्व दिइनुले साना कारोबारीहरुको मनोबल गिर्दै गइरहेको छ । ब्रोकर भन्दा कैयौँ गुना ग्राहक बढ्दा पनि धितोपत्र बोर्डले यसमा ध्यान दिन सकेको छैन् । ग्राहकहरुको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदा पनि ब्रोकरहरुले दिने सेवा खुम्चिदै गइरहेको छ ।
नेप्सेमा दिनहुँ जस्तै समस्या – शेयर कारोबार गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार ब्यबस्थापन प्रणाली टिएमएसमा दैनिक जसै समस्या आइरहेको छ । यस हप्ताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि करिब आधा घण्टा कारोबार ठप्प भएको थियो । यसबारे लगानी कर्ताले पटक पटक नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यता नेप्सेले भने डेटाबेजमा अवैधानिक हस्तक्षेप हुने कारण यस प्रकारको समस्या आउने बताउने गरेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेप्सेको टिएमएसमा आइरहने समस्या र दलालहरुको हेपाहा प्रवृतिलाइ रोक्न धितोपत्र बोर्डले केही सोँचेको छैन् । यही ब्रोकरहरुको ठगी धन्दालाइ कम गर्ने भनी बैंकलाइ नै ब्रोकरको काम गर्न दिन मिल्ने गरी लाइसेन्सको ब्यबस्था गर्न धेरै समय देखी माग हुँदै आएको भएपनि बैंकले त्यो सुविधा पाएका छैनन् ।